Kuyini ukwehla kwamandla kazibuthe, kubaluleke kangakanani futhi kwenzelwe ini | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sikhuluma ngakho ukwehla kwamandla kazibuthe Nganoma yisiphi isikhathi eMhlabeni sikhuluma nge-engeli phakathi kwendawo yasenyakatho kazibuthe nenyakatho yezwe. Indawo esenyakatho nayo yaziwa ngegama lenyakatho yangempela. Lokhu kwehla kwamandla kazibuthe kubonisa umehluko phakathi kwendawo esenyakatho kanye naleyo ekhonjiswe ikhampasi, eyi-magnetic north.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici nokuthi yimuphi umsebenzi ukwehla kwamandla kazibuthe onakho.
2 Kusebenza Kanjani Ukwehla Kwamagnetic
2.1 Enyakatho yezwe namandla kazibuthe
3 Ukubaluleka kokuncipha kwamandla kazibuthe
Ukwehla kwamandla kazibuthe akuhlali kuzinzile emhlabeni wethu. Ngokuya ngokuthi sikuphi, inani lalokhu lingahluka. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuhamba komhlaba nokujikeleza komhlaba nomphumela we-nutation, leli nani lokwehla kwamandla kazibuthe nalo liyashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Singasho ukuthi leli gama isisiza ukuthi sixolele konke ukungavumelani okukhona phakathi kwamamodeli wezimbangela ezinhle kanye neqiniso. Kungasisiza ukuthola umbono ngamamaki wephutha namaphutha wokubala akhona ezinhlelweni zokulinganisa ezinengqondo.
Igama elithi ukwehla kwamandla kazibuthe aliphakamisi ukuthi kungahle kube nokuhlukahluka okungalindelekile kuma-axes wokuxhumanisa. Singathola nemibono eyehlukene, izindawo ezihlukaniswe nendawo ezihlelwe kabusha futhi amanye amathuba okuthi sikwazi ukuphenya.
Kuneqembu lokucwaninga nelokukhiqiza elisanda kwakhiwa futhi elenziwe ngabadwebi ababukwayo, abaphathi kanye nama-theorists umsebenzi wawo oyingxenye yokwazisa ngezifundo ezahlukahlukene zangemva kwamakoloniyali nezenziwa ngamakholoniyali ngomongo oseduze. Leli qembu locwaningo libizwa ngokwehla kwamandla kazibuthe.
Kusebenza Kanjani Ukwehla Kwamagnetic
Uma sifuna ukwazi ukuthi lo mkhuba weplanethi yethu usebenza kanjani, kufanele sazi ukuthi i- uzibuthe wasemhlabeni. IPlanethi yoMhlaba inamandla kazibuthe ngenxa yokwakheka kwengqikithi yoMhlaba. Enye eyomhlaba yakhiwe kakhulu nge-iron ne-nickel. Lezi zinsimbi ezisindayo zisesimweni samanzi amancane engxenyeni engaphandle yoMhlaba. Lokhu kungenxa yokwanda kwamazinga okushisa ngokujula kanye nengcindezi ephezulu lapho kutholakala khona lezi zinsimbi namatshe.
Ngenxa yokunyakaza okukhona phakathi kobuningi bezinto ezingaphakathi komongo womhlaba kukhona okuthiwa imibukiso ye-convection. Le mizila ye-convection engubeni yileyo ebangela ukuhamba kwamapuleti we-tectonic kanye nalawo akhuthaza ukukhukhuleka kwezwekazi. Ngaphezu kwalokho, bayimbangela yale nsimu kazibuthe yalomhlaba.
Njengoba inqwaba yezinsimbi ezisindayo ihamba ngokuqhubekayo, kwenziwa imisinga eyahlukahlukene kagesi eyenzeka ngasikhathi sinye nokunyakaza futhi ikhiqize inkambu kagesi. Lokhu kwenza uMhlaba usebenze njengomazibuthe omkhulu futhi unamapali amabili kazibuthe: isigxobo esisenyakatho nesigxobo esiseningizimu. Uma sikhuluma ngokubuka kwamandla kazibuthe, isigxobo esisenyakatho siseningizimu futhi sisondele esigxotsheni esiseningizimu sendawo. Ngokwesinye isandla, isigxobo sasemazibuthe esiseningizimu siseduze kwesigxobo sasenyakatho sendawo. Lesi simo sezigxobo ezahlukahlukene zikazibuthe zeplanethi yethu yiso esivumela ukuthi isigxobo esisenyakatho senaliti yekhampasi esinamandla sikukhombe ngasenyakatho yezwe. Ukuma kwezigxobo zikazibuthe akuhambelani ncamashi nokwamazinti ezindawo. Uma kuliqiniso ukuthi basondelene kakhulu nabo yize bengenaso isikhundla esimisiwe. Lesi sikhundla siyahluka ngokuya kweminyaka kunikezwe ukunyakaza okuhlukile koMhlaba.
Enyakatho yezwe namandla kazibuthe
Indawo esenyakatho yilokho okwaziwa ngegama lenyakatho yangempela. Kuqondana ne-eksisi yokujikeleza komhlaba futhi iyona echaza ku: ukuhlangana nobuso bomhlaba. Ngakolunye uhlangothi sinendawo yesigodi esenyakatho futhi ngakolunye uhlangothi isigxobo seningizimu sendawo.
Uma sikhuluma ngamagama kazibuthe singasho ukuthi isigxobo senyakatho kazibuthe sichazwa yileyondawo kazibuthe lapho kukhomba khona amakhampasi. Ukuma kwalesi sigxobo sasenyakatho kazibuthe akuhambelani nokwasenyakatho yezwe futhi sekuyiminyaka kuhamba. Njengoba kunezifundo nemibiko ngokuma kwale nsimu kazibuthe, kuyaziwa ukuthi isikhundla siye sahluka cishe ngamakhilomitha ayi-1100 ukusuka ngekhulu lama-XNUMX. Okungaphezulu noma okuncane kuyaziwa ukuthi unyaka nonyaka umazibuthe wasenyakatho kazibuthe ushintsha indawo yakhe cishe ngamakhilomitha angama-60.
Njengamanje isigxobo sasenyakatho sikazibuthe sitholakala ebangeni elingamakhilomitha ayi-1600 ukusuka esigxotsheni sezwe esenyakatho. Itholakala enyakatho-mpumalanga yeCanada futhi ibheke eRussia. Akufanele sikhohlwe ukuthi inyakatho enamandla kazibuthe iyisigxobo esiseningizimu.
Ukubaluleka kokuncipha kwamandla kazibuthe
Kuyi-engeli endizeni evundlile eyakhiwe enyakatho kazibuthe nasenyakatho yezwe. Le engela, lapho ihambisa amandla kazibuthe enyakatho minyaka yonke nayo izonikeza amanani ayo. Akuhlukani nje kuphela neminyaka kodwa futhi nendawo lapho sikhona. Esinye sezizathu esenza amashadi we-nautical abe nenani elithile kungenxa yokuthi kunokwenyuka noma ukwehla konyaka kunani lokwehla kwamandla kazibuthe ngokuya ngesikhundla esikuso.
Ukwazi inani lokwehla kwamandla kazibuthe kufanele sazi ukuthi, uma amandla kazibuthe enyakatho engakwesokudla seNyakatho yangempela, ukwehla kwamandla kazibuthe kulungile. Ngakolunye uhlangothi, uma i-magnetic north itholakala ngakwesobunxele seNyakatho yangempela, ukwehla kwamandla kazibuthe kuzoba nenani elibi. Nakhu ukuthi uma sihlaziya amashadi we-nautical singathola amanani wombuthano ophothuliwe phakathi kuka-0 no-360 degrees futhi lokho kukhombisa inani lokwehla kwamandla kazibuthe ngonyaka wohlelo lweshadi elishiwoyo. Ngaphezu kwalokho, imvamisa isitshela inani lokwahlukahluka kwaminyaka yonke kwalokhu kuncipha kukazibuthe njengomsebenzi wokuhamba kwepali kazibuthe wasenyakatho.
Uma siphindaphinda ukwehluka kwaminyaka yonke kokuncipha kukazibuthe ngeminyaka edlula kusukela kushicilelo lweshadi kuze kube namuhla singaba nenani ngqo lokuncipha kukazibuthe okubuyekeziwe. Ngale ndlela, akudingekile ukuthi njalo ngonyaka kufanele sithenge ishadi elisha le-nautical.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokwehla kwamandla kazibuthe.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukwehla kwamandla kazibuthe
Konke odinga ukukwazi mayelana nesimo sezulu